Tanora tsy tara – Scooter : mamono mahafaty ny « courses sauvages » | NewsMada
Tanora tsy tara – Scooter : mamono mahafaty ny « courses sauvages »
Par Taratra sur 23/03/2016
Maro ireo tanora no matimaty foana amin’ny fisetrasetrana amin’ny fitondrana scooter eto amintsika. Anisan’ny tena mahatonga izany voalohany ny fanaovana ireny “courses sauvages” ireny…
Tsy mety fay mihitsy isika tanora. Indrindra ireo tia misetrasetra sy tia mifanenjika amina môtô scooter. Vao haingana indray mantsy ary tsy ela akory no namono nahafaty tanora iray ny fanaovana “courses sauvages” teny amin’ny Marais Massay.
Maro amintsika manana scooter mantsy no mifamontoana eny amin’ny Marais Massay iny rehefa andro alahady. Misy amintsika no mampiady vola sy mifampihantsy hifanenjika eny an-toerana ary dia raikitra izany rehefa mandeha ny fifanarahana. Ny fisotrosotroana sy fandraisana alikaola eny amin’ny manodidina eny anefa mandeha ihany.
Tsy azontsika an-tsaina mihitsy anefa fa mitera-doza ary mamono mihitsy ny “courses sauvages” izay ataontsika sy zary efa lasa fanaontsika io. Mila mitandrina hatrany ny tsirairay ary tokony hifehy vatana tsy ho voasarika amin’io “courses sauvages” io. Tsy miaraka velively ihany koa mantsy ny alikaola sy ny familiana na fanamoriana. Tsy maintsy mitera-doza hatrany raha vao ireo no miaraka.
Etsy andaniny, lasa mihafihafy ihany koa ireo mpampiasa iny lalana iny rehefa raikitra ilay “courses sauvages”. Ny mpanao “courses” tsy mijery na misaina akory hoe mety hahafaty ny zavatra ataon’izy ireo.
Noho izany, tsy misy tsara ohatry ny manara-dalàna ihany. Ny manao “courses” amin’ny toerana voatokana sy eo ambany fiahian’ny federasiona hatrany no azo antoka, hatreto. Andrasana ihany koa ny fandraisana andraikitry ny mpitandro filaminana amin’ny fanenjehana araka ny lalàna ireo mihoam-pefy na minia mandika izany sy manao bemarenina.